XOG+DAAWO: Xukuumadda Soomaaliya oo lacag ku bixinaysa Sharci halis oo horyaala baarlamaanka Faderaalka & Dawlad gobaleedyada diidan. – Puntlandtimes
May 20, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P_TIMES)- Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoog badan xalay galisay sidii loo meelmarin lahaa Sharciga Shidaalka ee Soomaaliya, oo maalmihii u dambeeyey horyaalay baarlamaanka Faderaalka.
Xukuumadda ayaa doonaysa in uu sharcigan dhaafo baarlamaanka, si ay uga faa’iideysto Xaraashka Shidaalka Soomaaliya oo ay siinayaan Shirkado iyo dawladdo Shisheeye oo heshiisyo lala galay.
Sharciga Shidaalka, oo ay isku haystaan dawladda Faderaalka iyo dawlad gobaleedyada ayaa leh halis weyn oo siyaasadeed, waxaana sidaas oo kale damaca qeyb ka ah dawladdaha waa weyn ee reer Galbeedka.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku bixinaya dadaalkii ugu dambeeyey sidii meelmar looga dhigi lahaa sharcigan oo uga gudbi lahaa mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka, iyadoo xalay la kala qaatay aduun lacageed, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo Madaxtooyada Faderaalka ee Muqdisho.
Dawlad gobaleedyadu waxay aad uga soo horjeesteen gabi ahaanba sharcigan Batroolka oo ay sheegeen in uu halis badan huwan yahay, Xukuumadduna ay diiday in ay dib ugu soo celiso golaha wada hadalada oo ay dhinacyadu is faham ka gaaraan, laakiin ay ku adkeysatay in ay dhankeeda wadan doonta oo kaliya.
Waantaagersanahay halasoodaaro shidaalka yaacunaya hadaanan anaga cunin? Madawarsi iyo tuugsibaa kujiraynaa Farmaajo iyo khayre janada ilahay hageeyo shidaalkana hanoosoosaaran faqriga aankabaxnee dalkeena aandhisano!